ko htike's prosaic collection: လုပ်သားပြည်သူအပေါင်းအား လေးလေးနက်နက် ပန်ကြားခြင်း
လုပ်သားပြည်သူအပေါင်းအား လေးလေးနက်နက် ပန်ကြားခြင်း
လူငယ်တော်တော်များများသည် ပြောခွင့်ကြုံရသော အချိန်တွေ အများကြီးရှိခဲ့ပါသည်။ထိုသို မြင်သော အကြောင်းအားလုံးမှာ ကြိုတင်ကာကွယ်ခြင်းထက် ဖြစ်နိုင်လျှင်ဖြစ်နိုင်၏ ၊မဖြစ်နိုင်လျှင် မဖြစ်နိုင်ဘူးဟုပြတ်ပြတ်သားသားနှင့် ပြောဆိုခြင်းပင်ဖြစ်ပါသည်။ စောင်ကြည့်ခြင်း၊ ဒါတွေကဒီလိုရှိတယ်၊ ဒါတွေကဟိုလိုရှိတယ်၊ နိုင်ငံရေးကို ဒီလိုလုပ်လို့ မရဘူး၊ ဘာဘူး၊ ညာဘူး ဆိုတာတွေ၊ သမိုင်းနဲ့ အခြေအနေက ဘယ်လို၊ ခေတ်ရေစီးကြောင်းက ဘယ်လို၊ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးကို လုပ်ဆောင်သွားကြသော ဟိုနိုင်ငံတွေ၊ ဒီနိုင်ငံတွေရဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်ကဒီလို၊ အစအစသဖြင့် ၊ဝေဖန်ရေးတွေ သုံးသပ်ချက်တွေကြားမှာ လက်ပစ်ကူးရင်း ရာစုများစွာ ရှိနေခဲ့တာကို ကြည့်ရင်း သက်ပြင်းမောတွေ များလာကြတာကတော့ ပြည်တွင်းမှာရှိသော တက်ကြွ လူငယ်၊ လူကြီးတွေတော်တော်များ၊ ပြည်ပတွင်ရှိသော တက်ကြွလူငယ်၊လူကြီးတော်တော်များများမှာ ရှိနေမှာကတော့ အသေအချာပါ။
ကျွန်တော်မြင်တာကတော့ အားလုံနဲ့ ဆန်ကျင်ဖက်တွေ ဖြစ်နေနိုင်သလို၊ သိပ်ပြီးတော့အနုစိတ် ဆန်သော အကြောင်းရာတစ်ခုမှ သိပ်မရှိပါ၊ ဘာလိုလည်းဆိုတော့၊ ရတယ်၊ မရဘူး ကြိုက်တယ်၊ မကြိုက်ဘူး၊ ရှင်းနေလို့ပါ။ ဒီနေရာမှာက ဒီတက်နဲ့ လှော်ဟိုနေရာကိုဟိုတက်နဲ့ လှော်ဆိုသော နိုင်ငံရေးဥပဒေသထက် နိုင်ငံရေးကစားကွက်ကိုလည်း ၀င်မပါချင်သလို၊ နိုင်ငံရေးကစားခြင်းကိုလည်း ပြတ်ပြတ်သားသား တုံးတိဖြတ်တောက်ချင် တာလည်းပါဝင်ပါသည်။
ကျွန်တော် လိုရင်းတိုရှင်းကို ပြောချင်တင်ပြချင်သည်မှာ ၁၉၉၀ ရွေးကောက်ပွဲကို လုံးဝ (လုံးဝ) မယုံပါ။ ဘာကြောင့်လည်းဆိုတာကို ပြောရန်တစ်ခုတည်းသော အဖြေမှာ စစ်တပ်က ပြောဆိုလုပ်ကိုင်ခြင်းဖြစ်လို့ပါဟု လွယ်လွယ်ကူကူပဲ အဖြေပေးပါရစေ။ ( အဲဒီအချိန်တုံးကတော့ ရှည်ဝေးသောအကြောင်းတွေ၊ ရှင်းပြချက်တွေ၊ ကိုးကားချက်တွေကို ပြောဆိုပြီးတင်ပြလည်း နောက်ဆုံး အဖြေနှင့်ရလဒ်မှာ မယုံကြည်ခြင်းဆိုတာကို ကိုးကားပြောဆိုခဲ့တာပါ။ အဲ .. တစ်ခုတော့ရှိပါသည်။ ရှင်းပြ၊ ကိုးကားပြောဆို၊ ထောက်ပြခြင်းကြောင့်၊ နားလည်သွားကြသည်မှာ မသိသေးသော အတွင်းရေးအကြောင်းများကို ဘယ်လိုရှင်းခဲ့ကြသည်ကို သိသွားကြသည်သာဖြစ်ပါသည်။ )
မည်သို့ ပင်ဆိုစေကာမူ အားလုံးသော သူတော်တော်မျာများမှာ လွယ်လွယ်ကူကူနှင့်တော့ ဟုတ်တယ်၊ ကျွန်တော်တို့ အားလုံး ဒါဆိုမလုပ်တော့ဘူးဆိုတာတော့ မဟုတ်ပါဘူး၊ ကျွန်တော်တို့ ဒီလိုတွေတင်ပြမယ်၊ ထောက်ပြမယ်။ ကမ္ဘာကလည်းသိတာပဲ၊ ကုလသမဂ္ဂလည်းရှိတာပဲ ဒီလောက်တော့ စစ်တပ်ကမလုပ်နိုင်ပါဘူးလို့ ပြောဆိုခဲ့ကြပါတယ်။ သို့သော်လည်း ၁၉၉၀ ရွေးကောက်ပွဲကို အသာလေးခေါက်ပြီးတော့ လုပ်ချင်ရာကို လုပ်သွားခဲ့တာကို နှစ်၂၀ ရှိသွားခဲ့ပါတယ်။ ရှင်းရှင်းပြောရရင် ပြည်သူအားလုံးကို သဘောတူတူ၊ မတူတူ၊ကြိုက်ကြိုက် ၊မကြိုက်ကြိုက်၊ ရိုင်းရိုင်းစိုင်းစိုင်းပါပဲ ကုတင်ပေါ်ခေါ်ပြီးဆက်ဆံသွားကာ ၄င်းတို့ စိတ်ဆန္ဒ္ဒ ပြည့်မြောက်အောင် လုပ်ဆောင်ခြင်းနှင့် လုပ်ဆောင်ပေးခံရခြင်း ဟုသာမြင်ပါသည်။
ယခုလည်းလာပါပြီး ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲ၊ ၂၀၀၈ မေလ အခြေခံဥပဒေ၊ ဟိုဟာ၊ ဒီဟာဆိုသော တင်ပြချက်တွေ၊ ထောက်ပြချက်တွေ အမြင်တွေများလိုက်တာ ဝေေ၀ဆာဆာပါဘဲ၊ ကျွန်တော်မြင်တာကတော့ အားလုံးမှာ ဇတ်ကားတကားကို မတိုက်ဘဲ အလိုလျှောက် ၀ိုင်းပြီး ညီတူမျှတူ ရေးဆွဲနေသည်ဟု ပင်ထင်ရအောင်ကိုဖြစ်သွားနေရပါသည်။
အဲဒီ အကြောင်းအရာကို ပထမဆုံး လုပ်ဆောင်နေကြသော၊ တော်လှန်ရေးကို ကြာရှည်အောင်လုပ်နေကြသော သူမှာမြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်တပ်နှင့် ၄င်းတို့၏ အသိုင်းဝိုင်းတစ်စုလုံးဖြစ်ပါသည်။ ထိုမှ တဆင့်တတ်၍ပြောသော နောက်ထက် ၄င်းတို့နှင့် အသိုင်းဝိုင်း မဟုတ်သော၊ အသိုင်းဝိုင်းဟုပင် မခေါ်ရနိုင်လောင်သော သူတွေကတော့ ဆင်ခြေရှင် မြန်မာ့နိုင်ငံရေးကိုလုပ်နေကြသော ပြည်တွင်းပြည်ပခေတ်ဆွေး နိုင်ငံရေးသမားတွေ၊ ပြည်တွင်း၊ပြည်ပ ဟိုမကျ၊ ဒီမကျ နိုင်ငံရေးသဘောထား မကြေလည်သောအဖွဲ့ တွေတိုင်းမှာ ရှိသော နိုင်ငံခေါင်းဆောင်ဆိုသူတွေ၊ ပညာရှင်တွေ၊ စစ်ရေးဆိုတာကို၎င်း မြန်မာ့နိုင်ငံရေးရာကို၎င်း လေ့လာနေပါသည်၊ သုတေသနပြုနေပါသည်ဟုဆိုသော ကျွမ်းကျင်သူဟုဆိုသော မြန်မာလူမျိူးများနှင့် ဖော်လံဖား နိုင်ငံခြားသားများနှင့် ၄င်းတို့ ၏ နိုင်ငံအတွက်ပဲ သေသေချာချာ အကွက်ချပြီး ကြည့်တတ်ကြသော နိုင်ငံခေါင်းဆောင် အသီးသီးများတို့ ပင်ဖြစ်ပါသည်။
ထိုသို့ လုပ်ဆောင်ရန် ၀ိုင်းဝန်းပို့ဆောင်သူများကိုသော်၎င်း၊ အခင်းအကျင်းကို ယူဆောင်သူတွေကို အရင်ကတော့ ခွဲခြားပြီးတော့ မြင်ကြည့်ပေးပါသည်။ သို့သော် ယခုတော့ မမြင်နိုင်တော့ဘူးဟု ပြတ်ပြတ်သားသားပင် ပြောရတော့ပါမည်။ ဘာကြောင့်လည်းဆိုတော့ ၂၀၁၀ ဆိုတာလည်း မလိုချင်တော့ပါ။ နောင် သုံးလတွင် ကျင်းပမည်ဟု ပြောထားသော ဆန္ဒခံယူ အတည်ပြုခြင်းလည်းထည့်ပြီး စကားမပြောချင်တော့ပါ။
မြန်မာနိုင်ငံတွင် နေထိုင်ကြသော၊ တိုင်းရင်းသားအားလုံး၊ ဘာသာအားလုံး၊ လူမျိုးအားလုံးသည်၊ လွတ်လပ်ခြင်း၊ တရားမျှတခြင်း၊ ညီမျှခြင်း၊ ဥပဒေစိုးမိုးခြင်း၊ ကိုယ်ပိုင်ယဉ်ကျေးမှုထွန်းကားခြင်းကို ရလိုချင်သည်၊ ပြည်သူအာဏာနှင့် ပြည်သူကတင်မြှောက်သော ပါလီမန် ဒီမိုကရေစီအစိုးရပေါ်ထွန်းဖို့ရာမှာ တစ်ခုတည်းသာရှိပါသည်။ ၄င်းမှာပြည်သူအပေါင်း ပြတ်ပြတ်သားသားနှင့် လမ်းမပေါ်ဆင်းကာ စစ်တပ်အစိုးရကို
ဖြုတ်ချပြီး ပြည်သူ့ ကြားဖြတ်အစိုးရကိုသော်၎င်း ၁၉၉၀ ပြည့်တုံးက ပြည်သူတွေကနေ ပြည်သူတွေကိုယ်တိုင် တင်မြှောက်ထားသော ကိုယ်စားလှယ်တွေကနေ ပြန်လည်တင်မြှောက်သော ဦးဆောင်ကော်မတီမှာ တိုင်းပြည်အစိုးရအဖြစ် အုပ်ခူပ်နိုင်အောင် ၀ိုင်းဝန်းလုပ်ဆောင်မှသာလျှင် ကျွန်တော်တို့ လိုလားသော အစိုးရတစ်ရပ်ကို ရမည်ဟု ယုံကြည်သည်။ ထိုမှလွဲပြီးမည်သို့သော အကြောင်းမှ စစ်တပ်ကို၎င်းတို့၏ နေရာမှန်ကို ပြန်သွားခြင်းမရှိဘဲ အကြောင်းမျိူးများစွာကို ကြည့်နေမည်၊ တွေနေအုံးမည်ဆိုပါက ကျွန်တော်တို့ နိုင်ငံတွင် မည်သို့သောအခါမှ စစ်အာဏာရှင်အောက်မှ လွတ်မြှောက်နိုင်ခြင်း မရှိသည့်အပြင်၊ ဆိုးဝါးသော လူမှုရေးပြောင်းလဲခြင်းနှင့် ယဉ်ကျေးမူပြောင်းလဲနှိမ့်ကျခြင်း၊ အပြင်ယခုတွေ့ကြုံရသော အခြေအနေထက် အဆ (၁၀၀) ဆိုးသော အခြေအနေသည် ကျွန်တော်တို့၏ မျိူးဆက်တို့ ခံစားရမည်မှာ အသေအချာဖြစ်ပါသည်ဟု ယုံကြည်ပါသည်။
လူငယ်တွေကော၊ ကျွန်တော်တို့အားလုံး အလွန်ကို သတိထားပြီးတော့ လုပ်ရမည့် အချက်ကတော့ ကျွန်တော်ပြောသည်မှာ မှားသည်၊ မှန်သည်၊ ခံယူသူပေါ်မှာသာ မူတည်ပါသည်။ ဘာကြောင့်လည်းဆိုတော့၊ ကျွန်တော်၏ အမြင်သာဖြစ်သောကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။ တူလျှင်လည်း ထိုအကြောင်းကို လုပ်ဆောင်ရန် မိတ်ဆွေဖြစ်သကဲ့သို့၊ မတူညီလျှင်လည်း ဒီမိုကရေစီပန်းတိုင်ကို လျှောက်သော အသွင်မတူသော မိတ်ဆွေအနေနှင့် သာရှိပေမည်။
Posted by ကိုထိုက် at 17:30
Emerald Soe said...
wdkufyGJ0ifoltcsif;csif; nDnGwf=uyg/ opPm&Sdyg/
အပေါ်မှ comment သည် `ကိုယ့်ယုံကြည်ချက်ကို သစ္စာမဖောက်ပါနှင့်။ တိုက်ပွဲဝင်သူအချင်းချင်းညီညွတ်ကြပါ။ သစ္စာရှိပါ။´
ကျွန်တော်အနေဖြင့် ပြောလိုသည်မှာ အထက်ပါ ဆောင်းပါးသည် ကျွန်တော်ရေးသော ဆောင်းပါး မဟုတ်သဖြင့် ရေးသူ မြင်သော အမြင်ကို ထပ်ဆင့်တင်ပြခြင်းသာ ဖြစ်ပါသည်။
နောက်တချက် အနေဖြင့်လည်း သူရေးသည့် ဆောင်းပါးသည် ဒီမိုကရေစီတိုက်ပွဲဝင်သူများကို တိုက်ခိုက်ခြင်းမဟုတ်ဘဲ အလုပ်ပိုလုပ်ကြရန်၊ ထိထိရောက်ရောက် လုပ်ကြရန်၊ နအဖ လုပ်ရပ်များကို စကားဖြင့် မဟုတ် အလုပ်လုပ်၍ ကန့်ကွက် ကြရန် ပြောပြနေခြင်းဖြစ်ပါသည်။ သစ္စာဖောက်ပြီး နအဖ အလိုကျ ပြောနေခြင်း မဟုတ်ဟု ယုံကြည်ပါသည်။
အမြင်အတူသူများ စုပေါင်း၍ အများအတွက် တိုင်းပြည်အတွက် အလုပ်လုပ်ကြသည်မှာ ဒီမိုကရေစီ ပုံစံပင် ဖြစ်ပါသည်။
အခုလို ဝေဖန်သည့်အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါသည်။
11 February 2008 at 22:58
it is truly confusing situation...the public has no other choice as they are under the gun. Some of the knowledgeable people believe that they should takeachance, but most of them have no time or no knowledge to think about what is really going on, the most important thing right now is to have food. I feel very sorry for everyone who reside in the country.
12 February 2008 at 10:27
25 March 2009 at 13:41
26 March 2009 at 03:32
13 April 2009 at 15:56